‘Humnootni Nageenya Kabachiisan Miidhaa Nurraan Geessisan’ – Gujiitti Jiraattota Aanaa Oddoo Shaakkisoo
Godina Gujiitti jiraattotnnii aanaa Oddoo Shaakkisoo 'jarreen nagaa eegan rakkoo nurraan gahaa jiru,' jedhu
Jiraattonni Aanaa Oddoo Shaakkisoo humnootni mootummaa nagaa kabachiisan tarkaanfii humnaa ol nurratti fudhatan jechuun komatan.
Jiraattonni Aanichaa VOA’f yoo dubbatan miseensota Raayya Ittisa biyyaa dabalatee warri nagaa kabachiisuuf garasitti bobba’e qabeenya balleessuu fi manneetii jireenyaa namootaarraan balaa geessisuu dubbatan.
Torbee darbee kanaa kaasuun Aanaa Oddoo Shaakkisoo gandootii sadii keessatti humnootni nageenya kabachiisuuf bobba’an tarkaanfii humnaa ol fudhataa jiru jedhu jiraattonni Aanaa Oddoo Shaakkisoo.
Kanaanis qabeenyi akka bade, manneetii jireenyaarrallee balaan dhaqqabuu jiraattonni nuuf himanii jiran.
Jiraataan kun yoo dubbatan yakka kana, warri naannoodhaa nagaa kabachiisu, miseensa raayya ittisa biyyaa waliin keessatti hirmaateera jedhu.
Ammaaf miseensonni Raayya Ittisa biyyaa gandoota kana keessaa bahanus nageenyi gandootii rakkinni kun keessatti mullatee ammas fooyya’uu dhaba sodaa jedhu qabnaa jedhu.
Jiraattonni gandoota Sawwaanaa, Danbii Uddoo fi Hangad dabalanii keessumaa warri seera kabachiisuuf tarkaanfii fudhate kun namoota bakka kaanii dhufee gandoota kana keessa jiraataa turerratti filee miidhaa geessiseeraa jechuun komatu.
Himannaa isaanii kana mirkaneffachuuf jiraataadhuma Aanichaa tokko gaaffee tarkaanfiin gandoota kana keessatti fudhatamuu himanii garuu jiraattota adda kan fooye mitii jechuun deebii kennan. Haalli nageenyaas nami qe’ee akka baqatu taasiseeras jedhu.
Obbo Alamuu Jaarraa Bulchaa Aanaa Oddoo Shaakkisooti gandoota akka sawwaanaa keessatti manni gubachuu, quba hin qamnu jedhu.
Jiraattonni nuti dubbisne nageenyi gandoota kanneenii bakkatti hin deebinee jedhanus bulchaan Aanaa oddoo Shaakkisoo obbo Alamuun garuu, sichi waanti ummata sodaachisu hin jiruu jechuun deebii kennanii jiran